I-Casa favoritesito Luxury Beach front home eduze ne-Managua - I-Airbnb
I-Casa favoritesito Luxury Beach front home eduze ne-Managua
El Tránsito, Departamento de León, i-Nicaragua
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Gwen
Indawo yami isogwini oluseduze kakhulu ne-Managua, nokutshuza emagagasini, ukubuka izinyoni, imvelo kanye ne-pueblo yasemaphandleni. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yokubukeka kwendawo yami, umuzwa ovulekile nokanokusho, ngokuvamile omakhelwane abangekho, amashawa amanzi ashisayo, izindawo zangaphandle, indawo ezungezile, umbhede ontofontofo, ukukhanya, inkanyezi ebusuku ngenkathi ulalele amagagasi, ukusetshenziswa kompheki kanye nesevisi ephelele yowesifazane, isevisi yokuwasha izingubo yokuzikhethela.. Indawo yami ilungele abantu abashadile, abahamba ngebhizinisi, nemindeni (enezingane).
Le ndlu yenzelwe izivakashi ukuthi zibe nokubukwa kolwandle okuhle kuzo zonke izindawo zezivakashi. Wonke amakamelo okulala alingana ngosayizi namasevisi, okwenza indlu ifanele abangane ukuba bajabulele futhi babelane.
Kukhona izisebenzi endaweni amahora angu-24 ngosuku.
Izivakashi zingaletha ukudla kwazo, noma kunjalo ukupheka akuvunyelwe. Abapheki bethu bazokwenzela lokho. Useholidini ukuze uzijabulise ngokuphelele! Nginikeza uhlu oluningiliziwe lwezinto eziyisisekelo ukuze ngenze ukuthenga izithako kube lula.
Indawo engenamuntu (indawo yeholide) inamakhaya amaningi amaholide, kanye nabantu bendawo abahlala eduze nolwandle. Uzobona abantu bendawo bephila ukulima nokudoba kwabo. Kukhona izingane ezizungeze amadolobha amakhulu futhi cishe. Ziningi izilwane zasendle, njengoba indawo ingeyasemaphandleni. Kusukela ezinhlobonhlobeni ezihlukahlukene zezinambuzane kuya kuma-parrots namantongomane, isibhakabhaka siyaphila. Awusoze wazi ukuthi hlobo luni lwezilwane zasendle ozohlangana nazo.
I have lived on 4 continents, and traveled extensively. I am Canadian, but have lived in Port Harcourt, Nigeria, Alhaurin el Grande, Spain, Singapore, and El Transito, Nicaragua. I…
Ngibe nekhaya e-Nicaragua iminyaka engu-10. Zizwe ukhululekile ukubuza noma yimiphi imibuzo. Uma ngingazi impendulo, ngizokwenza konke okusemandleni ami ukukutholela.
i-El Transito ibiyindawo yokulala kuze kube muva nje. Iba yindawo evakashelwayo nezayo. Ukuthuthukiswa komgwaqo omdala we-Leon, nokuba elinye lamabhishi aseduze kakhulu nenhloko-dolobha kanye nesikhumulo sezindiza kwenza kube indawo yezivakashi ekhangayo kakhulu.
i-el Transito ingasetshenziswa njengesisekelo sokuvakashela indawo ephakathi nasenyakatho ye-Nicaragua. I-pueblo iyihora elingu-1 ukusuka e-Managua, ne-Leon, namahora angu-2 ukusuka e-Granada, nesifunda sase-Masatepe ne-Chinandega.
Hlola ezinye izinketho ezise- El Tránsito namaphethelo